​भ्यालेन्टाइन डे प्रेमीसँगै मनाउनुपर्छ ?
न्यूजलय बुधबार ०२, फागुन २०७४
फेब्रुअरी अर्थात अंग्रेजी महिनालाई मायाको महिनाको रुपमा परिभाषित गरीन्छ । फेब्रुअरी महिना सुरु भएसँगै टीनएजरहरुले यस महिनालाई विशेष पर्वका रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।
फेब्रुअरी महिनाको पहिलो सातादेखि सुरुहुँदै हरेक दिन जसो मनाईने रोज डे, चकलेट डे लगायतका विभिन्न दिनहरु माया गर्ने जोडीका निमित्त....
​अपराधमा राजनीतिकरण, फाइदा कसलाई ?
न्यूजलय शनिबार २७, माघ २०७४
आज हाम्रो समाजमा अनेकन विकृती दिनानुदिन बढिरहेको छ । जसले हाम्रो समाज अनि राष्ट्रलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको छ । ऊर्जाशिल युवा अवस्था पनि यसबाट प्रभावित छ ।
कुनै पनि राष्ट्र विकासमा त्यस देशको युवाशक्तिको विशेष भुमिका हुन्छ । सहि ढंगबाट युवालाई ध्यान दिन सकिएन....
​फेसबुक विनाको दुई महिना
न्यूजलय शुक्रबार १२, माघ २०७४
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले चुनाबी चहलपहल तीब्र बनिरहेको थियो । ठुल्ठुला सभा समारोह भईरहेका थिए । शनिबारको दिन भएकाले मोरङ कै एक चुनावी कार्यक्रममा नेताहरुका साथमा म पनि उतैतिर हानिएँ ।
कुनै कार्यक्रममा पुगेपछि फोटो खिच्नु, सेल्फी खिँच्नु भनेको अहिले....
इटहरी चोकमा वीरेन्द्रको शालिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ
न्यूजलय मङ्गलबार २५, पुष २०७४
नेपाली राजनीति र साहित्यमा अमर नाम हो, ‘वीपी कोइराला’ । वीपीको योगदान नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन देशभरका विभिन्न स्थानमा शालिक बनाइएको छ । उनकै नाममा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलिएको छ । उनी स्वास्थ्यका विशेषज्ञ भएकाले नभइ उनको व्यक्तित्वलाई चिनाउनकै लागि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खोल्ने,....
​सर्वध्वज साँवाका सात लिगेसी जुन बिर्सदा इटहरी अपुरो हुन्छ
न्यूजलय मङ्गलबार १२, मङि्सर २०७४
नेपालभरी नै कुनै त्यस्ता पुर्वजनप्रतिनिधि छन्, जसले एक कार्यकालमै शहरले देखाउने सबैजसो कामहरु फत्ते गरेका छन् ?
नेपालमा त्यस्ता पुर्वजनप्रतिनिधि छन् जसले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कुनै दलीय संयन्त्र र एनजिओ/आइएनजिओको दोकान नखोलेर कपडा पसल खोलेर गुजारा गरे ?
कुनै पुर्वजनप्रतिनिधि छन्, जसलाई आफ्नो....
प्रचण्डलाई कतारबाट नेपाली युवाको ढाडस
परदेशमा डिउटी जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यही कुरालाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पुन मोबाईलमा आलराम बज्यो र जागे ।
बेलुका ढिलो सुतेको भएर बिहान उठ्नलाई केहि अप्ठ्यारो परे पनि आफ्नो परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा आफू उठ्नै पर्ने हुन्छ । सधैं झै म नुहाइ–धुवाई गरें....
​सस्ता छन् हाम्रा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु
न्यूजलय आइतबार १९, कार्तिक २०७४
टिभी कार्यक्रमहरुले प्रायः सबैलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । पहिले पहिले हरेक घरमा टेलिभिजन हुँदैन थियोे गाउँ मध्यमा एउटा घरमा भएको टिभीमा सम्पूर्ण गाउँ नै जम्मा भएर हेरिन्थ्यो । एउटा सादा टिभी त्यस घरको सम्पन्नताको प्रतीक बन्थ्यो ।
त्यो बेला न त अहिलेका जस्ता डिजिटल....
​नबिना दिदी, म तपाईको फ्यान
न्यूजलय शनिबार १८, कार्तिक २०७४
नबिना दिदि नमस्ते
सर्वप्रथम म कहाँबाट सुरु गरौं भनेर अलमलमा परी रहेको छु । पहिला त हजुरलाई अग्रिम शुभकामनासहित हजुर बाट धेरै आशाको प्रतीक्षा गरेका छौं । गायक, नायकको मात्र होईन एक सच्चा, निष्ठापूर्वक राजनीतिमा लागेको ब्यक्तिको पनि हजारौं लाखौं फ्यान हुन्छन् । जसको....
​स्मार्ट ! इटहरी
न्यूजलय आइतबार २९, असोज २०७४
भूकम्पपछिको नव निर्माणलाई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय विकासको पुनर्जागरणको रुपमा देशको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनु पर्छ । विपत्ति पछि हुँदै जाने आन्तरिक बसाइसराइ र यसबाट हुने बढ्दो शहरीकरणलाई अवसरको रुपमा लिएर शहरहरुलाई विकासको केन्द्रको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।
शहरहरु पूर्वाधार विकास....
​प्रहरीहरु, तपाईहरु चाहिँ इमान्दार बनिदिनु है
सन्दर्भ : प्रहरी दिवस
विराटनगर बस्दा म बसेको घरको छेवैमा सानी फुच्ची स्कुल जानेबेला आफ्नी आमासँग खुब झगडा गर्थिन् । सानी नानीकी आमाले पनि नर्सरीमा पढ्ने नानीलाई मिठा कुरा गरेर स्कुल पठाउन हरसम्भव प्रयास गर्थिन् । तर नानी कसैलाई टेर्दिनथिइन् ।